बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य: पेट्रोलको प्रतिलिटर ११८ र डिजेलको १०१ रुपैयाँ पुग्यो - Lekhapadhi.com मुख्य समाचार : Lekhapadhi.com lekhapadhi: global magazine of news and opinion
बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य: पेट्रोलको प्रतिलिटर ११८ र डिजेलको १०१ रुपैयाँ पुग्यो
लेखक : लेखापढी ३ चैत्र २०७७, मंगलवार २१:२८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । पेट्रोल तथा डिजेल/मटितेलको साबिकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ मूल्य बढेको छ । अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ११८ र डिजेलको १०१ रुपैयाँ पुगेको छ ।
हवाई ईन्धन (आन्तरिक उडानतर्फ)को साविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँले वृद्धि गरेर ७४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
एलपी ग्यास तथा हवाई इन्धन (आन्तर्राष्ट्रिय उडान तर्फ)को खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत नै कायम राखिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए ।
यो मूल्य समायोजन पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर रू. ९.३५, डिजेलमा प्रति लिटर रू. ५.८० र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर रू. ३९२.८२ घाटा कायम रहने उनले बताए । अर्धमासिक रूपमा निगमलाई करिब १ अर्व २७ करोड ७० लाख घाटा रहिरहने उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् ।
चन्द्रागिरी हिल्सको आइपीओ पहिलो दिन मै माग भन्दा करिब ४ गुणा बढी आवेदन